माओवादी केन्द्रले टुंगो लगायो मन्त्रीको नाम , कसलाई कुन ? – GALAXY
माओवादी केन्द्रले टुंगो लगायो मन्त्रीको नाम , कसलाई कुन ?
नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रीको नाम टुंगो लगाएको छ । विहीबार नेपाली कांग्रेससँग मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति भएपछि माओवादी केन्द्रले आफ्नो तर्फबाट मन्त्री चयन गरेको हो ।माओवादी केन्द्रले वन तथा वातावरणमा दीपक चर्तीमगर, कृषिमा चन्द्रबहादुर बुढा र अर्थ मन्त्रालयमा रामजी बरालको नाम टुंगो लगाएको जानकारी गराइएको छ ।
चन्द्रबहादुर बागलुङ, दीपक चर्तीमगर स्याङ्जा र बराल कास्कीका हुन् ।माओवादी केन्द्रले ११ मन्त्रालयमध्ये ४ मन्त्रालय पाउने गरी भागबण्डा गरिएको छ । यस अगाडि नै माओवादी केन्द्रबाट मधुमाया अधिकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भइसकेकी छन् ।
राजीनामा फिर्ता गर्न भिम रावल तयार , क्याम्प फेरे !
काठमाडौँ – शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने वा नदिने मामिलामा माधवकुमार नेपालसँग खटपट भएपछि सांसद पदबाट राजीनामा दिएका भीम रावलले अन्ततः राजीनामा फिर्ता लिने भएका छन्।
असार ३ गते शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिनुभन्दा केही घण्टाअघि रावलले राजीनामा दिएका थिए।रावललाई राजीनामा फिर्ता लिन एमाले नेताहरूले दबाब दिएका थिए। नेता नेपालले बिहीबार रावलनिवास टोखामै पुगेर राजीनामा फिर्ताका लागि विशेष आग्रह गरेका थिए।उक्त आग्रहपछि रावलले नेपाललाई यस विषयमा सोच्ने बताएका थिए। बिहीबार रावलले नेता नेपाललाई राजीनामा फिर्ता लिने जानकारी गराएको नेपाल निकट एक नेताले जानकारी दिए।